आज पनि सुनको मूल्य स्थिर ! चाँदी भाउ भने निरन्तर वृद्धि, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ??? – SUDUR MEDIA
March 16, 2021 AdminLeaveaComment on आज पनि सुनको मूल्य स्थिर ! चाँदी भाउ भने निरन्तर वृद्धि, हेर्नुहोस् कति पुग्यो तोलाको ???
नेपाली बजारमा सुनको मूल्य लगातार आज दोश्रो दिन पनि स्थिर रहेको छ । आज चैत ३ गते मंगलबार सुन आइतबारकै मूल्यमा कारोबार भइ रहेको छ । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अनुसार यस दिन छापावाला सुन प्रतितोला ८६ हजार ६०० रुपैयाँ र तेजाबी सुन प्रतितोला ८६ हजार १५० रुपैयाँमा खरिद बिक्री भइरहेको छ ।
यस साताको पहिलो कारोबार दिनदेखि सुन यसै मूल्यमा किनबेच भइरहेको हो । सुनको भाउ स्थिर रहेता पनि चाँदीको भाउ भने निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । मंगलबार चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँले बढ्दा प्रतितोला एक हजार २८० रुपैयाँमा कारोबार हुँदैछ । सोमबार पनि चाँदी तोलामा पाँच रुपैयाँले बढेर प्रतितोला एक हजार २७५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यो पनि हेर्नुहोस्ः चैतेधान धमाधम रोपाइँ हुँदै ! जिल्लामा चैतेधान रोप्न कृषक व्यस्त छन् । पूर्वी चितवनको रत्ननगर, खैरहनी, राप्ती र कालिका नगरपालिका, पश्चिम चितवनको भरतपुर महानगरपालिका र माडी नगरपालिकाका कृषक यतिखेर चैतेधान रोप्न व्यस्त भएका हुन् ।
धान रोप्नका लागि खेताला नपाउने समयमा मेसिनको प्रयोग प्रभावकारी भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “बीउ राख्नका लागि केही झन्झट भए पनि रोपाइँका लागि मेसिनले सहयोग गर्नेरहेछ ।”रासस
December 14, 2020 December 19, 2020 Admin